Dhuguma Dirooniin humna ABUTiin rukutameeraa? | Addis Zeybe - Digital Newspaper
Dhuguma Dirooniin humna ABUTiin rukutameeraa?
Rehobot Ayalew, Naol Getachew•August 27, 2021
Maxxanssi Tiwitar tokkogaafa guyyaa Hagayya 20, 2013 ALI Afaan Ingilifaatin maxxanseen, “...Humni Ittisaa Tigiray (ka ABUT jadhamu) dirree loolaa Amaraatti Diroonii loolaa Mootummaan Fedaralaa ittin fayyadamu rukutee ” jadhee ture.
Tiwitichii hanga barruun kun maxxanfamutti yeroo 375 ol yemmuu qoodameera. HaqCheck maxxansi Tiwitara kana SOBA jedheera.
Onkololeessa 2013 ALI irraa jalqabee hanga amatti Mootumma Fedaralaa Itoophiyaa fi Adda Bilisummaa Ummata Tigiray (ABUT ) jedduu looli itti fufe jira. Loollis kan jalqabe erga Mootummaan Federalaa ABUT Ajaja bahaa raayaa ittisa biyaa miidhuun yakee waraana itti bane booda.
Loola kana irrattis qondaalli RIB waraanaf Dirooni ammayyaa fayyadaratti ooluu himan.
Haata’u malee Fakkii duubatti deebisuudhan qorachuun fakkichi dhimma loola Tigiray waliin akka wal hi qabanne dhugoome. Fakkiin duraa yeroo jal qabaaf kan qoodame Onkoloolessa 20,2020 ALA yemuu ta’uu, innis Diroonin Turk waraana Ittisaa Artsakhtiin loola 2020 Nagorno-Karabakh irratti yeroo rukutame kan ka’edha.
Fakkii Jalqabaa 1
Fakkiin lammafaa Adoolessa 16, 2020 ALA kan kodamedha. Iniis yeroo Droonii Arman Humna Azarbajaanin rukutamee toora baahaa biyyatirrati kufe kan ka’eedha.
Fakkii duraa 2
Kanafuu, HaqCheck Diroonin Mootummaa akka tuwitii kana irratti jedhame human ABUTiin akka hin rukutamne dhugoomseera. Kanaafuu, maxxansi Tuwitari kun SOBA jedheera.
NEXT ARTICLE'Misale' aspires to help youth succeed through local mentorship
P.M Abiy Ahmed writes an open letter to Biden following sanction threats
Following the US president Joe Biden's administration decision to impose new sanctions on Ethiopia, Prime Minister Abiy Ahmed wrote an open letter.